प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Flag DV
कृपया हामीलाई उत्तरहरू दिइएका प्रश्नहरूको उत्तरहरूको चयन फेला पार्नुहोस्। यदि तपाइँसँग यहाँ प्रश्न गरीएको छैन भने कृपया हामीलाई enquiries@flagdv.appcentricuat.co.uk मा सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई जवाफमा जति सक्दो चाँडो फिर्ता आउँनेछौं।
के कोविड - १ ले मेरो भेटघाटलाई असर गरिरहेको छ?
१th मार्च २०२० सम्म हामी केवल टेलिफोन अपोइन्टमेन्टहरू प्रदान गर्ने छौं। यस समुदायका भाइरसको फैलावट बिरूद्ध हाम्रो समुदायलाई बचाउन अर्को सूचना नभएसम्म भेटघाट गर्न अनुहार भेट्ने छैन। हामीसँग बुक गरिएका सबै टेलिफोन अपोइन्टमेन्टहरू अगाडि बढ्नेछन् जबसम्म हामी तपाईंलाई सम्पर्क नगरे हामी तपाईंलाई अन्यथा बताउँदछौं। हाम्रो स्वयंसेवक जसले सल्लाह प्रदान गर्दछन् यस चुनौतीपूर्ण समयमा पीडितहरूका लागि प्रतिबद्ध रहन्छन् र हामी उनीहरूलाई धन्यबादका लागि धन्यवाद दिन्छौं।
म कहिलेसम्म वकिलसँग कुरा गर्न सक्छु?
प्रत्येक ग्राहक हाम्रो विशेषज्ञ वकीलहरु मध्ये एक संग एक निःशुल्क कानूनी परामर्श को हकदार छ। प्रत्येक भेटघाट 30० मिनेट जति रहन्छ।
व्यक्तिहरूले देख्न सक्छन् कि मैले तपाईंको वेबसाईटमा हेरें?
तपाईका खोज पृष्ठहरू तपाइँको ब्राउजर ईतिहासमा देखा पर्दैन भनेर सुनिश्चित गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। "इन्कग्निटो ब्राउजिing," यसको मतलब यसले तपाइँको ब्राउजि activity गतिविधिको कुनै ट्रेस छोड्दैन। इन्कग्निटोमा जानको लागि गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। शीर्ष फलकको दाहिने हाततर्फ होभर गर्नुहोस् 'अनुकूलन र गुगल क्रोम नियन्त्रण' आईकन फेला पार्न। यसलाई चयन गर्नुहोस् र मेनू 'नयाँ इन्कग्निटो विन्डो' बाट छनौट गर्नुहोस्। नयाँ विन्डो प्रयोग गर्न देखा पर्नेछ। सामान्य इन्टरनेट ब्राउजरहरूले प्राय हेराइमा राखेका सबै वेब पृष्ठहरूको रेकर्ड राख्दछन्, 'ईतिहास'। तपाइँको ब्राउजर ईतिहास मेटाउनको लागि इन्टरनेट ब्राउजरको प्रयोग गरेर किबोर्डमा Ctrl कुञ्जी होल्ड गर्नुहोस् र H कुञ्जी थिच्नुहोस्। भ्रमण गरिएका वा खोजी गरिएका साइटहरूको सूची देखा पर्नेछ र तपाईको व्यक्तिगत साइटहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको ईतिहासमा अब देखि नहुन चाहानुहुन्छ। तपाईंले भेस गर्न चाहानु भएको आईटमहरू छान्नुहोस् र मेट्नुहोस् चयन गर्नुहोस्।
के हुन्छ यदि कसैले तपाइँको वेबसाइटमा छु भनेर आउँछ भने के हुन्छ?
त्यहाँ कभर तपाईंको ट्र्याक्स फंक्शन हो जुन तपाईंलाई तुरून्त एक सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको शपिंग साइटमा स्थानान्तरण गर्दछ। यो 'क्विक एक्जिट' चिन्ह लगाइएको छ र यो सुविधा हो जुन तपाईंलाई हाम्रो वेबसाइट पृष्ठहरूबाट टाढा नेभिगेट गर्न अनुमति दिन्छ तपाईको गोपनीयतालाई कसैले बाधा पुर्‍याउनुपर्दछ जब तपाईं हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठमा तपाइँ पृष्ठको शीर्षमा रातो क्विक प्रस्थान बटन देख्नुहुनेछ। यो बटन क्लिक गर्नुहोस् र पृष्ठ तुरुन्तै सामान्यतया प्रयोग गरिएको किनमेल साइटमा परिवर्तन हुनेछ।
के तपाइँ दोभाषे मिलाउन सक्नुहुन्छ?
हामी नियमित रूपमा दोभाषे प्रयोग गर्दछौं र एक भाषा संग काम गर्दछौं जुन भाषाको विस्तृत सूची उपलब्ध छ। तिनीहरूसँग दोभाषेहरूको पोखरीमा द्रुत पहुँच छ, सबै मुख्य भाषाहरूलाई ढाक्छ। धेरै अनुवादकहरू आफैंले माइग्रेसन अनुभव गरेका छन् र सही, सांस्कृतिक संवेदनशील र सहानुभूतिपूर्ण सेवा प्रदान गर्न सक्छन्।
के तपाईको कार्यालय व्हीलचेयर पहुँच योग्य छ?
हो, हामी पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य छौं। कृपया हामीलाई पहिले नै हामीलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईंसँग कुनै पनि पहुँचको चिन्ता छ भने हामीलाई कुनै आवश्यक प्रबन्धहरू गर्न सक्षम गर्न।
के म फ्ल्याग डिभीका लागि स्वयम्सेवा गर्न सक्छु?
बिल्कुल। हामी सँधै स्वयम्सेवा वकीलहरू खोज्छौं जुन हामी गर्छौं हाम्रो समर्थनमा। हाम्रो बीमाको लागि सबै स्वयंसेवकहरू योग्य वकिलहरू हुनु आवश्यक छ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् enquiries@flagdv.appcentricuat.co.uk मा तपाइँको विशेषज्ञताको क्षेत्रको साथ हामी सम्पर्कमा जान्छौं।
के त्यहाँ पार्कि available उपलब्ध छ?
हामीसँग सबै क्लिनिक स्थानहरूमा पार्कि available उपलब्ध छैन तथापि हामी सँधै तपाईंलाई कार पार्क गर्न निर्देशन दिन सक्दछौं यदि तपाईंलाई पार्किंग आवश्यक छ भने।
के तिमी मलाई बस्नको लागि कतै भेट्टाउन मद्दत गर्न सक्छौ?
हामी बस्ने व्यवस्था प्रदान गर्न सक्षम छैनौं तर हामी अन्य संगठनहरूसँग घनिष्ट रूपमा काम गर्दछौं जसले घरेलु दुरुपयोगको शिकार भएका परिवारलाई समर्थन गर्दछन् जहाँ उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। हाम्रो वकिलहरूले तपाईंलाई कुनै हाउसिंग मुद्दाहरूको साथ समर्थन गर्न सक्दछन् जसलाई समाधान गर्न आवश्यक पर्दछ
के म बच्चाहरूलाई मेरो भेटमा ल्याउन सक्छु?
निस्सन्देह, हामी विश्वास गर्छौं कि सबैको लागि हाम्रो समर्थन पहुँच गर्न सक्षम हुनु महत्वपूर्ण छ र बुझ्दछौं कि बाल हेरचाह सँधै उपलब्ध हुँदैन। हामीसँग खेलौनाहरूको बाकस छ साना बच्चाहरूलाई छोटो समयको लागि राख्नको लागि। कृपया विचार गर्नुहोस् कि क्लिनिकको बखत हुने छलफलहरू बच्चाहरूको लागि सधैं उचित हुँदैन। बच्चाहरूमा घरेलु दुरुपयोगको प्रभावमा ठूलो अनुसन्धान गरिएको छ। थप जानकारीको लागि एनएसपीसीसी वेबसाइट हेर्नुहोस्।
के तपाइँ मलाई एक छेड़छाड़ गैर अर्डर प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रो अनुभवी पारिवारिक कानून सलिसिटरहरूले तपाईंलाई कसरी छेउछाउ नहुने आदेश, र कुनै पनि अर्डरहरू उचित छ भने कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे सल्लाह दिन सक्षम हुनेछन्।
के म कागजहरू मसँग ल्याउने?
तपाईले हातहतियार बनाउन आवश्यक सबै चीजहरू हुनु महत्त्वपूर्ण छ तर यो कुरा पनि लायक छ कि अपोइन्टमेन्ट केवल minutes० मिनेटको हो र वकीलसँग पर्याप्त विवरणहरू कागजातहरूको समीक्षा गर्न पर्याप्त हुँदैन। यो उपलब्ध समयको उत्तम उपयोग गर्न तपाईमा भर पर्दछ। हामी जहिले पनि हाम्रा ग्राहकहरूलाई प्रश्नहरूको सूची राख्न सल्लाह दिन्छौं जुन तपाईले यस कारणका लागि अपोइन्टमेन्टमा जानु भन्दा पहिले उत्तर दिन चाहानुहुन्छ।
के हुन्छ यदि म यातायात पहुँच गर्न असमर्थ छु?
हाम्रो ग्राहकहरूको एक ठूलो हिस्सा टेलिफोन मार्फत वकिलसँग कुरा गर्छन् किनकि उनीहरू आफ्नो परिस्थितिका कारण आमने सामने भेट गर्न असमर्थ छन्। वकिलहरु टेलिफोन सल्लाह प्रदान गर्न सहज छन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि अधिकतम समय उपलब्ध गराउनको लागि तपाई बैठकको लागि तयार हुनुहुन्छ र प्रश्नहरूको सूची छ जुन तपाई उत्तर दिन चाहानुहुन्छ।
के म कानुनी सहायता पाउन सक्दछु?
हाम्रा केही वकिलहरूले कानूनी सहायता ग्राहकहरूलाई समर्थन गर्दछन् तर सबै गर्दैनन्। कानूनी सहायता ग्राहकहरू लिन असमर्थ व्यक्तिहरूले तपाईंलाई स्थानीय वकिललाई निर्देशित गर्न सक्नेछन जो सक्षम हुन सक्छन्।
यदि तपाईं आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउन सक्नुहुन्न भने, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस पृष्ठ
हामीलाई तपाईंको प्रश्नहरू कल, ईमेल, हामीलाई लेखेर वा हाम्रो सम्पर्क फारम भर्नुहोस् र हामी सकेसम्म छिटो सम्पर्कमा रहनेछौं।